Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): May 2009
ဆီဆိုင်နှင့်မောက်မယ်မြို့ရှိ ရွာသားများ နအဖ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်
မေလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကရင် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ခမရ ၄၂၆ ကို ခြုံခိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အပေါ် ယင်းကျေးရွာသား များက ၎င်းတို့အဖွဲ့၏ အမာခံ ဖြစ်သည် ဟု စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယင်းဒေသခံက ပြောသည်။
ကောင်တိုင်း၊ ထီတရီး၊ လွယ်တောင် ကျေးရွာသုံးရွာရှိ ကျေးရွာသားများကို ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက်နေသည်ဟု ပအိုဝ်း အမျိုးသာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်စွဲထိုက အတည်ပြုပြောသည်။
“ဒီနေ့လည်း သူတို့ အဲဒီရွာသုံးရွာကို သောင်းကျန်းသူတွေ ဘယ်မှာရှိလည်း ပြောပြ မပြောပြရင် ရွာ ကို မီးရှို့မယ်လို့ ဒီနေ့ ခြိမ်းခြောက်ထားတာ ရှိတယ်။”
စစ်အစိုးရတပ်က ပေါ်တာခေါ် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုကြောင့် အမျိုးသားများ နေအိမ်မှ ပုန်းရှောင်နေရသည်ဟု ဒေသ ခံက ပြောသည်။
“ဒီအချိန်မှာ မိုးကျနေပြီဆိုတော့ တောင်ယာအလုပ်တွေကို လုပ်နေရတဲ့အချိန် အလုပ်မလုပ် ရရင်တော့ နောက်နှစ်ကျရင် ရွာသားတွေက စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့ ခက်ခဲမှု ရှိလာမှာ ပေါ့။”
မောက်မယ်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာသားများကိုလည်း မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်သည်ဟု ခွန်စွဲထိုက ပြောသည်။
“၁၀၂ တပ်ရင်းက တပ်ရင်းမှူး မျိုးမြင့်ဦးပေါ့ ဒုရင်းမှူး နိုင်မင်း ဦးစီးတဲ့ စစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းက လည်း အဲဒီ နောင်လောင်း၊ နားဟီး ဘက်မှာ သူတို့ရွာထဲကို ၀င်လာပြီးတော့ ယောက်ျားတွေကို ဖမ်း တယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ရွာပြင်ကို ထွက်လို့ ရှိရင် အဲဒီလူက သူပုန်ကို ဆက်ဆံတဲ့လူ ဒါမှမဟုတ် သူပုန်ဆိုပြီးတော့ စွပ်စွဲပြီးတော့ သူတို့ လိုက်ဖမ်းထားတာ ရှိတယ်ခင်ဗျား။ နောက်ပြီးတော့ ရွာထဲမှာရှိတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ ကြက်ဝက် ဘဲတွေကိုလည်း သူတို့ ဖမ်းပြီးတော့ သတ်ဖြတ်စား လုပ်လုပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရွာထဲ မှာရှိတဲ့ ဆိုင်တွေကိုလည်း ဆိုင်ထဲမှာရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေ အကုန်လုံး ယူငင်စားသောက်တယ် ခင်ဗျား။”
ပအိုဝ်းနှင့်ကရင်တပ် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ စစ်အစိုးရ ခမရ ၄၂၆ ကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဆီဆိုင်နှင့် မောက်မယ်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာသားများကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှု အတင်းအဓမ္မ ပေါ်တာဆွဲမှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင် လာသဖြင့် ကျေးရွာသားများ စိုးရိမ်ကြောက် လန့်နေရသည်ဟု ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်နေမှု ပအိုဝ်းအဖွဲ့အစည်းများကန့်ကွက်
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်္ဘမိုႛနယ်မှာရှိတဲ့ ခမရ ၄၂၅ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ စောဆားရွာသူကြီးနဲႛ အသက် ၂ဝ အရွယ် လူငယ်တဦးကို ပအိုႛဝ်အမဵိုးသား လွတ်မြောက်ရေး သူပုန်တပ်တွေနဲႛ အဆက်သွယ်ရှိတယ် ဆ္ဘိုပီး မေလ ၆ ရက်နေႛက သတ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လိုႛ ဒေသခံ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကတဆင့် စုံစမ်းသိရပၝတယ်။
နအဖစစ်တပ်က ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ ဧ္ဘပီ ၂၈ရက်နေႛက အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ကလေး သုံးဦးအပၝအဝင် ႟ွာသား ၁၂ဦး၏ အလောင်းမဵား မှတ်တမ်းပုံ ဖြစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
အဲဒီလို သတ်ဖြတ်မှုတွေအပြင် စောဆားနဲႛ နောင်ဗန် ရွာသား ၈ဝ လောက်ကိုလည်း မသင်္ကာမှုနဲႛ ဖမ်းဆီးသွားတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ရဲႛ လုပ်ရပ်နဲႛပတ်သက်လိုႛ ထိုင်းအခြေစိုက် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးက ကြေညာခဵက်တစောင် ထုတ်ပြန်္ဘပီး ကန်ႛကွက် ပြောဆိုလိုက်ပၝတယ်။
အပြစ်မဲ့ဒေသခံတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က အခုလို သတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဟ္ဘာပီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃ ရက်နေႛက ခမရ ၄၂၆ ကို ပအိုဝ်းနဲႛ ကရင် ပူးပေၝင်းတပ်တွေက ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့္ဘပီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေၞလာတာလိုႛ ပအိုႛဝ်ပြည်သူႛလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်္ဘပီး၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်ခြေနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အခုလို သုံးသပ်ပၝတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ။ ။“စစ်အုပ်စုဟာ အပြစ်မရှိတဲ့ ရွာသားတွေကို အနိုင်ကဵင့်္ဘပီးတော့ သတ်ဖြတ်နှိက်စက်တာတွေ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကဵနော်တိုႛပအိုဝ့်ပြည်သူတွေက ကြောက်ရွံ့ထိပ်လန်ႛသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဖိနှိပ်လေ ပြည်သူတွေက ပ္ဘိုပီးတော့ တော်လှန်ရေးနဲႛ ပူးပေၝင်းသွား္ဘပီးတော့ သူတိုႛကို နောက်ဆုံး လူထုစစ်ပွဲသဘောမဵိုးပြန်တိုက်သွားမှာကို သတိထားသင့်တယ်။ အပြစ်မရှိတဲ့ ရွာသားတွေကို ဒီလို တဖက်သတ်နှိက်စက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒၝကို PNO/ PNA က ကြားဝင်ရှင်းသင့်တယ် နည်းနည်းထိန်းသင့်တယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛ မြင်တယ်”
ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ ပြောဆိုသွားတဲ့ PNO/ PNA အဖွဲ့ဟာ ဦးအောင်ခမ်းထီ ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်္ဘပီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲႛ အပစ်ရပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပၝတယ်။
ဖယ်ခုံ္ဘမို့အခြေစိုက် တခစ စစ်ဒေသကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ခဵုပ်မဵိုးအေးကတော့ PNO/ PNA ဟာ ကိုယ့်ဒေသကို ကိုယ်မထ်ိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ သတ်မှတ်အတည်ပြုထား္ဘပီး ဖြစ်တဲ့ ပအိုႛဝ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသကို အခြေခံဥပဒေကနေ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမယ်လိုႛ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက္ဘခိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရပၝတယ်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနယ်မြေအတွင်း လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးအခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပအိုဝ်းပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Thursday, 07 May 2009 17:20 Hseng Khio Fah
The clash took placed because the Burma Army is still committing human rights abuses to the villagers, according to the rebels. A joint Pa-O National Liberation Army (PNLA) – Karen National Liberation Army (KNLA) force ambushedaBurma Army patrol in Hsihseng township.
ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် စစ်တပ်က ရွာသူကြီးကိုသတ်၍ ရွာသား၈၀ကျော် ဖမ်းဆီးထား
ခွန်အောင်မြတ်။ မေလ ၇ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်က ကျေးရွာ သူကြီးကို သတ်ပြီး ရွာသား (၈၀) ကျော် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေသည်ဟု ဒေသခံရွာသားတယောက်က ပြောသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ကရင်တပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့က ခြေမြန်တပ်ရင်း ၄၂၆ ကို ခြုံခို တိုက်ခိုက်ပြီးသည့်နောက် ယခုလို သတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။
By: ASSAWIN PINIJWONG
TAK : Two ethnic rebel groups opened fire onaBurmese military patrol near Wanyen village, in southern Shan State, killing 12 soldiers. A source with the Karen National Union said the Pa-O National Liberation Army had teamed up with troops from the Karenni National Progressive Party,aKNU ally, to attack Burmese soldiers at the village 90km south of Taunggyi.
The rebels surrounded the Burmese patrol before opening fire. Twelve Burmese soldiers, includingalieutenant colonel, were killed ina20-minute clash, the source said.
The Pa-O and Karenni forces seized weapons and equipment from the government troops including eight rifles,amachine gun,amortar, an RPG rocket launcher and three radios.
A source said Burmese military authorities were upset by the defeat and they had sent in reinforcements from five battalions to prepare foracounter-attack. Security sources predictedamajor clash would take place soon.
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသကို ပြန်ရုပ်သိမ်းမည်ဟု နအဖ ဗျူဟာမှူး ခြိမ်းခြောက်
မေလ ၆ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ပီအဲန်အို)၏ အထူးဒေသ(၆) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသကို မထိန်းချုပ်နိုင်လျှင် ပြန်ရုပ်သိမ်းမည်ဟု စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (၇) (စကခ) ဗျူဟာမှူးက ပြောသည်ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ယခု မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းနှင့် ကရင် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့သည် စကခ ၇ လက်အောက်ခံ ခမရ ၄၂၆ တပ်ရင်းမှ စစ်ကြောင်းတခုကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တဖွဲ့လုံး ကျဆုံး သွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စကခ (၇) ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးအေးက ယင်းသို့ ပြောလာသည်ဟု ပီအဲန်အို အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“အခု သူတို့ ဘယ်လိုစိုးရိမ်နေလဲဆိုတော့ ပအိုဝ်းဒေသတွေမှာ သူတို့ တအားစည်းရုံးနေတယ်လေ။ ၂၀၁၀ နီးကပ်နေပြီဆိုတော့။ သူတို့နည်းပရိယာအမျိုးမျိုး သုံးနိုင်တယ်လေ နော်။ သူတို့ပြောနေတဲ့ စကားကတော့ စကခ (၇) ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးအေးကလေ သူပြော နေတာကတော့ ဒီပအိုဝ်း(ပီအဲန်အို)တွေက သူတို့ဒေသကို မထိန်းနိုင်ဘူးလား။ အဲလို ပီအဲန်အိုကို ကြိမ်းမောင်းနေတယ်။ မင်းတို့ဒေသကို မထိန်းနိုင်ရင် အဲဒီ အထူးဒေသကို ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လိုနေပြီ။ အဲလို ခြိမ်းခြောက်လာတယ်။”
ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဆိုက်ခေါင်နှင့် ဘန်းယဉ်ကြားရှိ ကျေးရွာများကို အခွန်လိုက်ကောက် နေသည့် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၄၂၆မှ ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းထွန်း ဦးဆောင်သည့် အင်အား ၁၂ ဦး အဖွဲ့ကို ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့နှင့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ခြုံခိုက်တိုက်ခိုက်ရာ ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းထွန်း အပါအ၀င် အားလုံးကျဆုံးပြီး လက်နက်ကြီးငယ် ၁၃ လက်ကို သိမ်းဆည်းရမိသည်ဟု ပီအဲန်အယ်လ်အို က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပီအဲန်အို အရာရှိက မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ဒု-တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ချစ်ဦးက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာကို လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
“အဲဒီနေရာမှာ နအဖ တပ်ရင်းငါးရင်းနဲ့ လိုက်ရှင်းနေတယ်။ အဲဒီ တပ်ရင်းငါးရင်းက စကခ (၇) ကလေ။ စကခ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးအေး သူက ဘန်းယဉ်မှာ ထိုင်နေတယ် အခု။ သူက အဓိက အဲမှာ ကွပ်ကဲနေတယ်။ ရွာသားတွေ အခြေအနေကတော့ အခု သူတို့ ရွာတိုင်းကို ခေါ်ပြီး စစ်ဆေး နေတယ်။”
ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(ပီအဲန်အယ်လ်အို)မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန်က မြန်မာစစ်အစိုးရ စကခ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးအေးက ပီအဲန်အိုကို ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသည်မှာ မှန်ကန် ကြောင်း သို့သော် ပီအဲန်အိုအတွက် ထူးခြားမှု တစုံတရာ မရှိနိုင်ကြောင်း ပြောသည်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုတဲ့ဟာ သတ်မှတ်ပေးတာ ပြောရရင်တော့ သူတို့ စကခ (၇) စစ်ဒေသ ကွပ်ကဲရေးမှူးတယောက်အနေနဲ့ သတ်မှတ် ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန် ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံမှာ ၁၃ နှစ်ကြာအောင်မှ အစည်းအဝေး လုပ်ပြီးတော့မှ ချမှတ်ထားတဲ့ ဟာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ ပီအဲန်အို အနေနဲ့ တုန်လှုပ်လည်း မတုန်လှုပ်နိုင်ဘူး။ တုန်လှုပ်နိုင်စရာ အကြောင်းလည်း မရှိဘူးလို့ ကျနော်တို့ တော့ ဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်။”
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်သည် ဗိုလ်မှူး ခွန်အောင်ခမ်းထီ ဦးဆောင်ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ထားသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းက ကချင်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကယားပြည်နယ်ရှိ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို မြန်မာ စစ်အစိုးရက သီးခြားတွေ့ဆုံပြီး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မှ နယ်ခြားစောင့်တပ် ရဲတပ်ဖွဲ့အသွင် ပြောင်းရန် ခေါ်ယူ ဆွေးနွေးချိန်တွင် ပီအဲန်အိုအား ခေါ်ယူဆွေးနွေးခြင်း မရှိသေးဟု သိရသည်။
PNLA ပအိုဝ်းတပ်ဖွဲ့၊ KNLA ကရင်ပူးပေၝင်းတပ်ဖွဲ့များ စစ်အစိုးရတပ်နဲႛ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်္ဘမို့နယ်အတွင်းမှာ PNLA ပအိုဝ်းအမဵြိးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲႛ KNLA ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ပူးပေၝင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဒီကနေႛ မေလ ၃ ရက်နေႛ မနက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရတပ်နဲႛ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပၝတယ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်္ဘမို့နယ်နဲႛ ၂၅ မိုင်လောက်အကွာ၊ ဘန်ႛယဉ်ကေဵးရွာအရှေ့ဘက်က စောဆားနဲႛ နောင်တပန် ပအိုဝ်းရွာနှစ်ရွာအာကြားမှာ မနက် ၁ဝ နာရီက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပၝ။ ပအိုဝ်းအမဵိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲနဲႛ ကရင်အမဵိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တပ်မဟာ ၃၊ တပ်ရင်း ၉ က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေၝင်းထားတဲ့ အင်အားတရာကေဵာ်ဟာ ဆီဆိုင်္ဘမို့နယ် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ ၇ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ ခမရ ၄၂၆ ဗိုလ်ကြီးမဵိုးအောင် ဦးစီးအဖွဲ့ကို ခြုံခို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပၝတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ပအိုဝ်းအမဵိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က အထွေထွေအတင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန်က အတည်ပြု ပြောဆိုပၝတယ်။ အခုလို စစ်အစိုးရတပ်တွေကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ရတာဟာ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက ပအိုဝ်းဒေသတွင်းက ဒေသခံပြည်သူတွေကို နေရင်းဒေသတွေကနေ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေႛ နေရာခဵတာကြောင့်နဲႛ လူႛအခွင့်အရေး ခဵိုးဖောက်ခံရမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လိုႛ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်သူရိကပြောပၝတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်သူရန်။ ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လင်းခေး္ဘမို့နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကို ဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်္ဘပီးအခုဆိုရင် ပေးမနေတဲ့အတွက် လူထုတွေ ဒုက္ခရောက်္ဘပီး အနောက်ဖက်ခြမ်းကို ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်။ ကရင်ပည်နယ်ထဲမှာလည်း ဒီလိုပဲ ထိုးစစ်ဆင်လိုႛ လူထုတွေ ပြေးရတာရှိပၝတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ဒေသမှာလည်း သူတိုႛ တပ်စခန်းဆောက်ဖိုႛ တအိမ်ကို ဘယ်လောက်ဆ္ဘိုပီး သက်ကယ်တွေတောင်း၊ သွပ်ပြားတွေတောင်း္ဘပီး အနိုင်ကဵင့်နေတာတွေရှိပၝတယ်။ အဲဒၝကြောင့် ကဵနော်တိုႛ အရင်တုန်းက ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲ နည်းသဏ္ဒာန်ပေၝင်းစုံနဲႛ စစ်အစိုးရကို တိုက်သွားမယ်လိုႛ ပြောထားတဲ့အတိုင်း ကဵနော်တိုႛ တိုက်တာပဲ ဖြစ်ပၝတယ်”
စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲႛ ပအိုဝ်းပြည်သူလူထုတွေကို အခုလို အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့နေရာခဵထားမှုတွေနဲႛ လူႛအခွင့်အရေး ခဵိုးဖောက်မှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ပအိုဝ်းအမဵိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲႛ္ဘမို့တွင်း ပြောက်ကဵားတိုက်ပွဲတွေပၝ ဆက်လက်ဆင်နွဲသွားမယ်လိုႛ ပြောဆိုပၝတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်သူရိန်။ ။“နအဖအနေနဲႛ လူသားခဵင်းစာနာတဲ့ စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စမျိုးဟာ သူတိုႛမလုပ်သင့်ပၝဘူး။ အမှန်တကယ်က သူတိုႛကို မကေဵနပ်လိုႛ တော်လှန်နေတဲ့လူတွေကို တိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူတွေကိုပဲ သူတိုႛလိုက်တိုက်သင့်ပၝတယ်။ အခုလိုမဵိုးလူထုကို အကြပ်ကိုင်္ဘပီး ဟိုနေရာ ပြောင်းရွှေ့ဒီနေရာပြောင်းရွှေ့။ ဒၝက မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စပၝ။ ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛလည်း တကယ်လိုႛ တောနေလူထုတွေကို အခုလိုမဵိုးအိမ်ပစ်ယာပစ် အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး္ဘမို့တွင်းပြောက်ကဵားကို ဖန်တီနိုင်တဲ့အထိ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်တယ်”
ပအိုဝ်းအမဵိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဟာ မူလအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည် လူမဵိုးပေၝင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ရလလဖ အမည်နဲႛ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ စစ်အစိုးရနဲႛ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးယူထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်္ဘပီးတော့္ဘပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှာ ရလလဖ ဗဟိုဌာနခဵုပ်ကနေ ခွဲထွက်လာခဲ့္ဘပီး ကရင်နီအမဵိုးသားတိုးတက်ရေးပၝတီ ထိန်းခဵုပ်ရာနယ်မြေမှာ အခြေစိုက်ကာ စစ်အစိုးရကို ပြန်လည် တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ပၝတယ်။
နအဖတပ်ကို ကရင်နှင့်ပအိုဝ်း ပူးပေါင်း ခြုံခိုတိုက်ခိုက် နအဖ ၁၂ ဦး သေဆုံး
မေလ ၃ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PNLA) နှင့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တို့ ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်မှ အကျအဆုံးများပြီး လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိသည်။
PNLA နှင့် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့သည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီက မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့အား ခြုံခို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်အစိုးရတပ်မှ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သား အလောင်း ၁၂ လောင်းနှင့်အတူ လက်နက် ၁၃ လက်ကို သိမ်းဆီးရမိသည်ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန်က ပြောသည်။
“အဲဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ အဲဒီမှာပါလာတဲ့ သူတို့(စစ်အစိုးရ)စစ်ကြောင်းရဲ့ အင်အားက အားလုံး ၁၂ ယောက် လောက်ပဲရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့သိရတယ်။ အဲဒီ ၁၂ ယောက်လုံးပါပဲ ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့က ခြုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်တော့ အားလုံး အလောင်း ၁၂ လောင်းကိုလည်း သိမ်းဆီးလိုက်ရတယ်။ ကျနော်တို့ လက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံ ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကိုလည်း ၁၃ လက် သိမ်းပိုက်ရရှိတယ်ခင်ဗျ။ နောက် ကျနော် တို့ စကားပြောစက်အငယ် ၂ လုံး၊ အကြီး ၁ လုံး နောက်မြေပုံတစ်ချပ် အဲတာသိမ်းဆီးလိုက်ရတယ်။”
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်၌ PNLO မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စန်းယုဦးဆောင်သော ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၅၀ ကျော်က မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (စကခ-၇) လက်အောက်ခံ ခမရ ၄၂၆ တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းထွန်း ဦးစီးသည့် ၁၂ ဦးပါ တပ်ဖွဲ့အား ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှ ၆၀ မမ စိန်ပြောင်း ၁ လက်၊ စက်လတ် ၁ လက်၊ RPG-9 တစ်လက်၊ MA-1 လေးလက်၊ MA-2 တစ်လက်၊ MA-3 နှစ်လက်၊ MA-4 တစ်လက်၊ 9mm နှစ်လက် နှင့် လမ်းလျှောက်စကားပြောစက် အသေးနှစ်လုံး၊ အကြီး တစ်လုံး၊ မြေပုံ တစ်ချပ်တို့ကို သိမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
PNLA နှင့် KNLA တပ်တို့ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ လတ်တလောအခြေအနေအရ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒေသများ၌ စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွဲနေမှုများ ရပ်တန့်သွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန်က ပြောသည်။
“နောက်ထပ်တခုကတော့ ဒီကြားမှာပဲ နအဖ ကနေပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ နယ်စပ်တွေကို စစ်ဆင်ရေး ထိုးနေတဲ့ကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့က လက်တုန့်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ အနေနဲ့လည်း ပါပါတယ်ခင်ဗျ။ အထူးသဖြင့်တော့ အခု ကျနော်တို့ လင်းခေးမြို့နယ်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒီ ပန်တ၀ီးတို့ ပန်ကပီးတို့ အဲဒီဖက်မှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ ပအိုဝ်းရွာတွေကို ဖြတ်လေးဖြတ် လုပ်ပြီးမှ မောင်းထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို နအဖ တပ်တွေအနေနဲ့ ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ အဲတာကိုလည်း အဓိက အကောင်အထည် ဖော်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။”
ယခုတိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်း သော်လည်း အတည်မပြုနိုင် သေးကြောင်းပြောဆိုသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားတပ်မတော် (PNLA) သည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် ရှမ်းပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့(ရလလဖ) မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ခွဲထွက်၍ စစ်အစိုးရအား လက်နက် ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။